I-condo enembonakalo entle yentaba namachibi - I-Airbnb
I-condo enembonakalo entle yentaba namachibi
Iintaka zaseParadesi yintsapho yabucala eneeyure eziyi-24 zokhuseleko kwanomphathi wesayithi. Izinto ezimangalisayo ezinomxube wabanikazi kunye nabantu abarentayo baseKhanada naseMerika
Ukubona kakuhle ichibi kunye neentaba ukusuka ebhalikhoni. Ikhitshi namagumbi okuhlambela asandul 'ukulungiswa ngo-2017. Zonke izixhobo ezitsha kunye nee-blinds kunye ne-drapery kunye nezibane kuyo yonke le yunithi. Ubukhulu bebhedi enkulu kwigumbi lokulala ngalinye. Inyama eyojiweyo iyafumaneka kwibhalkhoni. Ilungele abantu abadala, inqwelo-moya enye yezitepsi ukuze ungene kule ndawo. Simahla kwindawo yokuhlamba impahla. Iinkonzo ezikhoyo
Iindwendwe zizisebenzisa zonke izinto: ipuli enamanzi ashushu, ibhafu enamanzi ashushu, indawo yokujima, indlu yeeklabhu, ibhari kunye nelayibrari yesayithi. Ngexesha lonyaka elixakekileyo kukho izinto ezininzi ezenziwa ngamaqela...i-yoga, iiklasi zokuhamba ngeenyawo, iiklasi zamanzi
Asikho kwisayithi kodwa abaphathi beeofisi bakhona ukuze bancede ngayo nantoni na
Indawo entle onokuya kuyo ngeenyawo ukuya eWalmart, iSuper Lake grocery store, indawo yokuthenga. Yonwabela yonke indawo enayo
Iivenkile zokutyela ezintle, ukunyuka intaba, intenetya, imidlalo yeqonga, ukuhamba ngephenyane, ukudlala igalufa, iimuvi, iicawa, ibhanki kunye neemarike zokutya okusemgangathweni
Wamkelekile kwiyunithi # kwindawo entle yeeNtaka zaseParadesi. Silungise ikhitshi namagumbi okuhlambela kunye neekhethini ezintsha, ii-blinds kunye neefeni zafakwa kule ndawo. Ikhitshi linayo yonke into oyifunayo kwaye linemiphezulu yeetafile ezintsha zelitye lenyengane. Kukho inyama eyojiweyo kwibhalkoni netafile entsha yokuphola nokubuka ubuhle bayo.
Ithivi kunye neShaw cable zikwiyunithi.
I-wifi ekhawulezayo ngoku
kwi-condo nakwii-complex * I-2019 entsha... umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla ufakiwe
SiseSan Antonio kufutshane neAjijic kunye neLake Chapala zonke ziyafikeleleka ngokuhamba, ngebhasi okanye ngeeteksi. I-Guadalajara ingaphantsi kweyure eyi-1 ukusuka kwi-condo yethu, apho unokufumana khona unyango lwakho lokuthengisa kwi-Costco, i-Home Depot kunye nezinye iivenkile ezinkulu zokuthenga. Nangona kunjalo, ungathenga nakwiivenkile ezininzi ezimangalisayo kwilali yaseAjijic. Kukho iimarike ezahlukeneyo zokutya okufreshi veki nganye, ezineziqhamo nemifuno kunye nokutya okumnandi kwasekuhlaleni, qiniseka ukuba uyazijonga. Thenga, ufumane isidlo sasemini uze uhambe ngeenyawo kwi-Montcon!
Asikho kwisayithi, kodwa siza kufumaneka ukuze sikuncede wonwabele iintsuku zakho eparadesi!